Umhlobiso womshado ekhaya - Imibono engcono kakhulu ongayithokozela | Bezzia
USusana godoy | 22/07/2021 14:00 | Kubuyekezwe ku- 22/07/2021 14:02 | Umhlobiso
Ngabe uyashada kodwa ufuna ukukwenza ngendlela esondelene kakhudlwana? Ngakho-ke ungenza ifayili le- umhlobiso womshado wasekhaya okuqinisekile ukuthi ingomunye wemibono emihle kakhulu. Ngoba kuzoba yindawo okuyo, ungayijabulela imibono yakho emihle futhi, ukonga imali eningi, okuhlala kuyizindaba ezinhle njalo.
Kepha ngoba ishibhile, akudingeki ukuthi ibe isidina kakhulu, kude nayo. Futhi ekhaya ungabheja nge umshado wamaphupho, kufanele nje ubheje kweminye imibono yokudala. Uqinisekile ukwenza usuku lwakho lube ngolunye olukhetheke kakhulu empilweni yakho yonke, njengoba kufanele kube njalo.
1 Ukuhlelwa kwembali yomshado wasekhaya
2 Izihlalo nomhlobiso wazo
3 Ungalokothi ukhohlwe izithombe!
4 Ibha yokhuni
5 Ukubheja ngesitayela semvelo kakhulu nesirustic
6 Izintambo zama-light light ukukhanyisa umzuzu wakho omkhulu
Ukuhlelwa kwembali yomshado wasekhaya
Ngaphandle kokungabaza, ukuhlelwa kwembali kungenye yemininingwane ebaluleke kakhulu kufanele sihlobise umshado wethu. Ngakho-ke, zama ukuthi emnyango wensimu noma indawo lapho umcimbi uzobanjelwa khona, ube nezinhlelo zezimbali ezinhlangothini zombili, ematafuleni futhi ungahlobisa nezindawo zodonga. Vele, zama njalo ukuhlanganisa imibala nezimbali ozithanda kakhulu. Amathoni we-Pastel azoba usizo kakhulu kukho konke lokhu, ngoba awavuseleli imvelo.
Izihlalo nomhlobiso wazo
Okomzuzu womcimbi, akukho okufana nokuhambisana nawo nomhlobiso omuhle kulowo nalowo kubo. Ungabamboza ngendwangu ngesikhathi somkhosi wakho womshado. Kepha ungabheja futhi ngokubeka izihlalo ngaphandle kwezembozo kepha ngemininingwane. Ngisho, ungakwazi ukuhlobisa ngezithombe noma amabhaluni, njengezihlalo zedili. Vele izihlalo zikamakoti nomkhwenyana zingenziwa ngezifiso ngezincwadi. Akuwona umqondo omuhle lowo?
Ungalokothi ukhohlwe izithombe!
Izithombe zihlala zihlobisa futhi zisisondeza ezinkumbulweni ezingacimeki. Ungakhetha ukubeka eyodwa enkabeni yetafula ngalinye, eduze kwezivakashi zakho. Uma unesikhumbuzo esiyingqayizivele, kungcono ukusibeka eduze kwezimbali ezisetafuleni. Impela lapho befika behlala phansi, bazomamatheka kamnandi. Uma kunezihlahla eziseduze, ungabeka futhi intambo ezungezile bese ulengisa izithombe ozikhetha kuyo.
Ngokhuni singenza noma yini esiyifunayo. Ngoba kumayelana cukuvula ibha lapho izivakashi zingazinikeza khona iziphuzo ezizithandayo. Ungabeka futhi amatafula, nawo awokuqeda okufanayo, ngama-canapés noma nge-dessert bar. Yimibono ewela futhi ngaphakathi komhlobiso ngoba isivakashi ngasinye sizojabulela imvelo yangempela engakaze ibonwe ngaphambili futhi sikwazi ukuba nalelo kona ukuzisebenzisela ukuthanda kwabo. Emishadweni yasekhaya, singaqasha insizakalo yokupheka noma sibeke isitayela samahhala se-buffet.
Ukubheja ngesitayela semvelo kakhulu nesirustic
Uma usunayo imibono yokuthi ufuna ukuhlobisa kanjani umshado wakho kodwa uswele isitayela, khona-ke sizokutshela ukuthi isiphetho se-rustic yiso esithatha umklomelo wokuqala. Kungenxa yemvelo yayo futhi ngoba ine izakhi zemvelo ezifana nezimbali zasensimini, izithunzi ezinsundu, izintambo futhi neleyisi ehlangana kanye nokuthinta ukuvuna esikuthanda kakhulu. Ngakho-ke, imibala ye-beige noma yesihlabathi kanye nomhlophe kukhethwa njalo emcimbini ofana nalona. Njengoba sishilo ngaphambili, ungahlala ubheja amakhekhe ngoba ahlangana ukudala isimo sothando, okuyilokho esikudinga ngempela.
Izintambo zama-light light ukukhanyisa umzuzu wakho omkhulu
Akudingeki ucabange ngamalambu amakhulu, ngoba ngama-bulb uzobe usunokuningi ngokwanele. Yingakho ngezinye iziqeshana ezifanayo uzobe unikeza ukuthinta kokudala nobungokwemvelo endaweni yakho. Yebo, kuyiqiniso ukuthi ungabeka futhi inkambu ezungeze ingadi enikeza nokukhanya. Ucabangani ngale mibono?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Ukuhlobisa imishado yasekhaya